के साच्चीकै सोचेजस्तो छ त नेपालीका लागि जापानमा ? - Samudrapari.com
के साच्चीकै सोचेजस्तो छ त नेपालीका लागि जापानमा ?
तर, नानीदेखि लागेको बानी भनेझैं नेपालीहरुले जापानमा पुगेर पनि आफ्नो बानी परिवर्तन गर्न सकेका छैनन । त्यहीकारण जापानमा रहेका नेपालीबाटै नेपाली ठगिने गरेका छन् । ठगीको एउटा माध्यम बनेको छ, जापानको आकर्षक रोजगारी । रोजगारी दिलाइदिने नाममा अहिले पनि जापान र नेपालमा ठगी भइरहेको छ ।
जापान भन्ने बित्तिकै खुट्टा उचाल्नेहरु नेपालमा धेरै छन् । बाहिरबाट हेर्दा जापानमा रुखबाटै पैसा टिप्न पाइने गरी ठूला ठूला सपना बोकेर जापन उड्नका लागि लालायित देखिए पनि जापानकै वास्तविकता भने भिन्न छ । झण्डै ७० हजार नेपाली रहेको जापानमा औंलामा गन्न सकिने केहीबाहेक धेरै नेपालीका सपना तुहिरहेको छ । विद्यार्थी बनेर जाने अनि पढने पनि, पैसा पनि कमाउने सपना जोडेर र भाषा नै नजानेर, भूगोल र व्यवस्था नै नबुझेर जानेहरुको पीडा असाध्यै निराशा लाग्दो छ, जापानमा ।
कम्तीमा १२ लाख रुपैंया तिरेर जापान गएको विद्यार्थी, जब जसले गाउँको घरखेत बन्दकी राखेको सोच्छ, तब उसको दुर्दशा सुरु हुन्छ । हप्तामा २८ घण्टा मात्रै काम गर्न पाउने नियम र हरेक दिन कक्षामा उपस्थित हुनैपर्ने अर्को नियमका बीच उसले सोचिरहेको हुन्छ, कसरी पैसा कमाउँ र नेपाल पठाउँ । जुन असम्भव जस्तै सत्य हो । सबैभन्दा बढी यहीं पक्तिकारसँग पनि ठगी र कष्टको चपेटामा परेको अनुभव छ ।
कुकका लागि जापान पुगेका धेरै नेपालीको अवस्था त्यति राम्रो छैन । अधिकांश नेपाली इन्डियन रेष्टुरेण्टमा काम गर्छन । नेपालीले नै खोलेका रेष्टुरेण्टको बाहिर नाम ‘इन्डियन रेष्टुरेण्ट’ राख्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी इन्डियन नभनेसम्म उनीहरुको खानेकुरा बिक्दैन, या पसलमा ग्राहक छिर्दैनन । नेपालको अस्मितालाई भारतमा विलय गराएर भएपनि केही नेपालीले रोजीरोटी चलाएका छन । आफ्नै रेष्टुरेण्ट खोल्ने नगन्य नेपालीको अवस्था त राम्रै छ, तर कामदारको रुपमा काम गर्ने धेरैको अवस्था कष्टकर छ ।
हुन त जापानमा अधिकांश त्यस्ता व्यक्ति ठगिन्छन्, जो व्यक्तिगत भिसामा जापान छिर्छन । म्यानपावर कम्पनीबाट पठाइएका प्रशिक्षार्थी कामदारको अवस्था तुलनात्मक ठीकै छ । तर, प्रशिक्षार्थी कामदार नगन्यमात्रामा मात्रै जापान पुगेका छन् । जापानको रोजगारी खाडी र मलेसिया जस्तो सजिलो छैन । पहिलो त भाषाको समस्या, दोस्रो जापानले भनेजस्तो दक्ष कामदार समेत दिन सकेको छैन, नेपालले । यहीकारण आठ बर्षसम्म करीब दुई सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन् । जापानमा कामदार पठाउने विषय केवल मिठो गफ मात्रै बनिरहेको छ ।
जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङको अपरेसन अर्गनाईजेशन (जिट्को) मा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरु आशातित रुपमा नेपाली पशिक्षार्थी कामदार पठाउन अक्षम भएपछि जापानको बजारप्रतिको नेपाली अपेक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । सन् २००३ मा जिट्को र श्रम मन्त्रालयबीच नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने बिषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएतापनि सोचेजस्तो प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान सकेनन । त्यसबेला नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई दिइएको थियो । तर जिट्कोको जटिल प्रक्रिया र नेपाली कामदारको कागजात लगायतको समस्याका कारण उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन त्यत्ति इच्छा व्यक्त गरेन ।
सन् २००९ मा आएर श्रम मन्त्रालयले नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा दिने तयारी सुरु गर्यो। तर बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफुहरुले मात्र जापानको काम गर्न पाउने अभिलाषाका साथ श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी र श्रम मन्त्री समेतलाई प्रभावित पार्न तिर लागे, जसको कारण श्रम मन्त्रालयले खासै निर्णय गर्न सकेन । पछि श्रम मन्त्रालयले जिट्कोको अडान भन्दै २० वटा संस्थालाई मात्र जिट्कोमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी गर्यो । त्यसमा समेत ठूलै चलखेल भएपछि श्रम मन्त्रालयले १ सय ७० वटा म्यानपावर कम्पनी र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई कामदार पठाउन स्वीकृत दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अधिकार पाएपछि जापानमा कामदार पठाउने क्रमले केही गति लिएको तर जति अपेक्षा व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले गरेका थिए, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन ।
अहिले जापानले चीनबाट मात्र वार्षिक ६० हजारको हाराहारीमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । जुन कुल जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको ८० प्रतिशत हो । र, जापानी कम्पनीहरु चीनको यो हिस्सालाई घटाउने तयारीमा छन् । तर नेपाली कम्पनीहरुले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनन ।
जापानको रोजगारी नेपालीका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो । किनकी जापानबाट नेपालमा सीप र पूँजी दुवै भित्राउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले एउटा खास नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ ।